10 degel oo aad ka dhigi karto faylalkaaga si dhakhso leh, fudud oo bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Naqshadeynta Webka, Khayraadka, dhowr
Wixii naqshadeeye kasta waa aad muhiim u ah leeyihiin a galka internetka shaqooyinkooda halka ay karayso macmiil aragto shaqadeena waana nala soo xiriiri kartaa, na shaqaalee oo u shaqee.
Ujeeddadu waa in la helo bogga internetka ee magacayaga ama magaca wakaaladdeenna ama xafiiskayaga naqshadeynta oo aan ku martigelinno faylalka ay ka shaqeeyaan, laakiin haddii aadan haysan waqti, lacag ama aqoonta lagama maarmaanka ah ee aad ku qaabeyn karto faylalkaaga gaarka ah, waxaa jira daraasiin degello ah oo shaqadan noogu fudud.
1 Miyay lagama maarmaan tahay in la helo faylalka shaqada?
2 10 degel si aad ugu abuurto faylalkaaga lacag la’aan
2.5 Kaarboon kaarboon
Miyay lagama maarmaan tahay in la helo faylalka shaqada?
Waxyaabo badan ayaa is beddelay markay tahay helitaanka faylalka halkaas oo aan ku soo bandhigi karno farshaxanka ama farsamada gacanta ee aan qabanno. Waxaan u leenahay sababta oo ah mahadcelinta xawaaraha isku xirka ugu fiican iyo noocyada kala duwan ee qalabka, samaynta faylalkaaga si dhakhso leh, fudud oo bilaash ah ayaa hadda suurtagal ku ah qaab aad u fudud
Waxaan ka hadleynaa xawaaraha isku xirnaanta maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan soo saarno waxyaabo ka tayo wanaagsan, xallinta iyo xitaa fiidiyoowyo fiidiyoow ah. Laakiin aan wajahno, waxaanuna ku tusaynaa 10 meelood oo aad kartid sameyso faylalkaaga ka dibna tus macaamiisha iyo shirkadaha ka soo fududaanta riix boggaaga.
10 degel si aad ugu abuurto faylalkaaga lacag la’aan
Waxaan ku bilownay Behance maxaa yeelay loogu talagalay farshaxanada naqshadeynta, sawir, sawir iyo in ka badan, waa meel muhiim ah oo ay tahay inaad haa ama haa noqoto. Waxay ku jirtaa dalladda Adobe, markaa haddii aad leedahay koontada 'Cloud Cloud', waxaad si toos ah ugu qaabeyn kartaa Photoshop si aad ugu dhaafto abuuristaas cusub ama mashruuca Behance si xitaa kuwa raacsan ay ula socdaan socodka shaqada ee shaqo ama taxane ah.
Waqti u baahan si aad uhesho kuwa raacsan, laakiin sida shabakadaha kale ee bulshada, jecel, raacista iyo raadinta kuwa na raacaya, waxaan awoodi doonaa inaan kaqeybqaado bulsho yar oo fanaaniin ah mudo gaaban. Waxaad ku haysataa bilaash akoon Adobe ah, markaa ma sahlanaanin. Isku xirku waa mid aad ufiican oo dareen leh si looga tago faylalka aad u qabow.
Kuwa kale meelaha ugu fiican ee loogu talagalay farshaxanada shabakadda Oo halkan, iyo sidoo kale Behance, waxaan la wadaagi karnaa goob aqoonyahanno iyo waliba hiwaayad bilaabaya sawir, sawir ama xitaa xayeysiinta.
DeviantArt ayaa noo ogolaanaya waxay leeyihiin gundhig gebi ahaanba bilaash ah taasna waxaa arki kara boqolaal kun oo isticmaaleyaal ah oo shabakadani leedahay. Waa mid ka mid ah kuwa ay ku jiraan tiro badan oo isticmaaleyaal ah, sida kii hore oo kale. Qaabkeedu waa wax yar oo farshaxan ah oo ku jira faylalka, laakiin waa meel ay tahay haddii aad dhab ka tahay tan. Haddii aad maamusho Ingiriisiga ama luqad kale, dhammaantood way fiicnaanayaan.
Flickr had iyo jeer wuxuu ku xirnaa sawir qaadista, sidaa darteed waxaan u daynaynaa kuwa idinka mid ah oo naftooda u huray laantan. Mid ka mid ah awoodaha ugu waa weyn waa tiro badan oo sawiro ah oo aad gali karto iyo macluumaadka ESIF ee ka muuqda sawir kasta. Taasi waa, way ogaan karaan ISO-ga aad isticmaasho, heerka soo-gaadhista iyo dhammaan xogtaas muhiimka u ah sawir.
In kastoo ay tahay a bogga loogu talagalay sawir qaadistaSawiradaada sidoo kale waxaa lagu calaamadin karaa inay yihiin farshaxan ama sawirro, markaa waxaad heli kartaa macaamiil. Laakiin waxaan idhi, waa goob weyn sida faylalka tacliimeed.
Mid kale oo ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu muujiyo faylalkaaga. In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo noocyada farshaxanka ah, haddana waa heer dijitaal ah oo Dribbble uu lahjadda gelinayo. Dhibaatada kaliya ama naafanimada jirta ayaa ah in la helo booskaaga oo aad ku soo rogto farshaxankaaga waxaad ubaahantahay casuumaad. Ma jirto waddo kale oo lagu heli karo illaa aan raacno xisaabaadka Twitter-ka oo aan fiiro gaar ah u yeelano casuumaadaha.
Sidan ayaa ay ku abuureen a bulshada la wadaagaya casuumaadaha oo kanu waa jidkiisii ​​uu ku yimid ilaa hadda. Mid ka mid ah jaaliyadaha farshaxanka ugu fiican ee loogu talagalay xayeysiinta dhijitaalka ah iyo sidoo kale naqshadeynta ama sawirka. Ha moogaan oo isku day inaad hesho casuumaad. Waxaad had iyo jeer weydiin kartaa saaxiibbadaada saaxiibbada haddii ay qof garanayaan.
Xalkani maahan midka ugu wanaagsan, laakiin waxaan dooneynaa inaan ka helno degel internet ah koontada bilaashka ah ee aan ku heli karno. In kastoo lama arki karo sanduuqa dhexdiisa mooyee. Si kale haddii loo dhigo, waanu dejin karnaa galkayaga bilaashka ah haddii aan aragno inaan jecelnahay sida uu u muuqdo madalku, waxaan heli karnaa saddexda qorshe ee uu Carbonmade la yimaado.
Waxaa jira $ 8 bishii 8 mashruuc, 50 mashruuc oo loogu talagalay 12, horeyna 18 doolar bishiiba si loo helo mashaariic aan dhammaad lahayn. Waxay u diraan mashaariicda farshaxanka la soo rogay. Faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah inay bixiso khibrad aad u macaan oo aan loo baahnayn inaan madaxeena cunno.
ThemeForest waa a bogga kumanaan mawduucyo loogu talagalay CMS kala duwan. Waxaa ka mid ah WordPress oo noo oggolaanaya inaan u helno mawduucyo u heellan xirfadlayaal iyo farshaxanno. Taasi waa, waa in la raadiyo mid ku habboon, iyada oo laga bixiyo ugu yaraan 20-30 euro oo waxaan yeelan doonnaa mowduuc diyaar u ah in lagu rakibo WordPress.
Mawduucyadan waxay badanaa la yimaadaan casharro inaan ka tagno webka oo diyaar la ah faylalkayaga oo aan ka tagi karno inta hartay si aan u qaabeyno waxyaabaha qaar Sidii hore loo sheegay, waa inaad xoogaa wax ka qabataa WordPress, sidaa darteed waqti yar waxaad kuheli kartaa degel xirfadle ah oo leh url kuu gaar ah, emayl shaqo iyo inbadan. Tani waxay u egtahay inay siinayso aqoon dheeraad ah arrinta oo ogaanshaha farshaxan leh urlkiisa iyo emaylkiisa waxay siinaysaa nuxur badan qandaraasyada suurtagalka ah ee noo yimaada.
Xalkan waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay waa lacag la'aan. Waxay ku imaaneysaa ikhtiyaarka ah inaad ku darto qolalka sawirada, baloog iyo xitaa domain aan horey uga kireysanay martigelinta. Way jaban yihiin, sidaa darteed waxay noo oggolaan doonaan inaan ka baxno rakibaadda WordPress iyo inaan url la haysto emaylladooda iyo kuwa kale.
Barxadani waxay daryeeli doontaa inta hartay, taas oo ka socota tifaftiraha webka ay kuu saamaxayso inaad abuurto faylal xirfadlayaal ah oo leh shaqo ka yar labada xalka ee kor ku xusan. Waxaad arki kartaa tusaalooyinka websaydhada si fiican loo qabtay. Oo waxaan kugula talineynaa inaad ku kireysato domain leh emayl si aad ugu qaadatid heer kale. Goob xiiso leh oo aan dhihi karno maya haddii aan raadineyno faylal bilaash ah. Xitaa url-kaaga waxaad naga caawin kartaa inaan dhibaatada ka baxno oo na tus khadka tooska ah adigoon qarash gareeyn euro.
Madal kale u heellan fanaaniinta iyo hal-abuurka taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud oo bilaash ah ugu helno galka faylalka. Waxa ugufiican dhamaan, waxay leedahay qorshayaal dhowr ah oo kufiicnaan kara faylalkaaga. Midka bilaashka ah wuxuu ka kooban yahay boggeeda gaarka ah waana tijaabin karnaa hadda.
Haddii aan mar hore dooneyno inaan aadno qorshaha 9 euro bishii, waxaan lahaan doonnaa domain bilaash ah sanadka ugu horeeya iyo xayeysiin la'aan. Si kale haddii loo dhigo, waxaad yeelan doontaa faylalka-bilaash bilaash ah, laakiin Xusuusnow inaad arki doontid xayeysiin. Tanina waa haddii ay taasi mugdi gelin karto waayo-aragnimada macmiilkaas kuu imaan doona si aad ugu raaxaysato farshaxankaaga. Xayeysiintu had iyo jeer gadaal ayey u socotaa.
Waxaan u keydinay Etsy sabab, sababtoo ah waa goob ku habboon sida faylalka loogu talagalay kuwa iibiya walxaha, farshaxanno ama xitaa daabacaadda farshaxankaaga. Koontadaada bilaashka ah waxay noo ogolaaneysaa inaan soo dhigno farshaxanimada ay tahay inaan iibino. Si kale haddii loo dhigo, waa inaan qiimo ku saarnaa waxyaabahayaga. Tan waa la celin karaa, laakiin haddii aad jeceshahay inaad sameysato koofiyado gaar ah oo leh nashqadahaaga, ma jiro meel ka wanaagsan Etsy oo lagu soo bandhigo farshaxankaaga oo sidaasna ku iibiso.
Haddaad Ingiriis wax ku qabatid waad gaari kartaa halkaas gees kasta oo meerahan ah oo internet ka ku yaal. Hadana haddii aad sameysid sawir gacmeedyo aan la taaban karin, waxaad la xiriiri kartaa macaamiil badan oo raadinaya rinjiyeyn ka duwan oo naqshad gaar ah u leh gurigooda. Taasi waxay noqon kartaa naftaada, markaa waxaad durba lumisay fursad aad farshaxankaaga ugu saari lahayd Etsy, ku calaamadee oo u dulqaado inaad barato dadka kale si ay uga hadlaan farshaxankaaga.
Instagram waa shabakad bulsheed, haa. Laakiin waxaan u isticmaali karnaa sida faylalka loo yaqaan 'portfolio' sidaasna ay ku gaaraan boqollaal milyan oo qof. Xaqiiqdii, Instagram waa mega ay adeegsadaan kumanaan farshaxanno ah. Waxay dhigayaan xogtooda, sawirka astaankooda ka dibna qoraal kasta ayaa loo sameeyaa si loo muujiyo mid kasta oo ka mid ah sawiradooda, sawirada. Xitaa hadda waxaa loo isticmaali karaa sidii dukaan internetka lagu iibiyo. In badan oo inri ah, waxaad dhigi kartaa shaashad sawir ah si aad u muujiso horumar iyo hal-abuur. Kaalay, waa fursad kale oo weyn oo aad ku dhejin karto faylalkaaga oo aad ku gaarto dad badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » 10 websaydh oo aad ka dhigi karto faylalkaaga si dhakhso leh, fudud oo bilaash ah
Waad salaaman tahay, ma dhacdaa inaad wax ogaato ama aad haaysid casharro ku saabsan wordpress? Waxay dhahaan waa wax aad u wanaagsan, fudud oo raqiis ah, laakiin maadaama php iyo css midkoodna uusan aheyn waxkeyga, waxaan ka dhigayaa mid aad u adag: / salaan, blog weyn.
Jawaab Olivia R. Orduña
Waad salaaman tahay, sidee tahay, faylalka tacliinta sare waxaa loo isticmaali karaa in lagu daabaco sawir gacmeed lagu sameeyay mise maya?
Ku jawaab erisi
Waad salaaman tahay sidee ku heleysaa ama u sameyneysaa faylalka tacliinta waa mid aad u fudud
Ku jawaab marisol
Haye, sidee tahay sidee u fududahay in la sameeyo faylafoliyo wax kasta?
Websaydhkaaga dhaqaalaha dijo
Aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirintaada! Waxaan horeyba ugudarey faylalka shaqadayda inta badan talooyinkaan aad noosameyso. Runtii waan ku qanacsanahay waqtiga aad ku qaadatay baaritaanka bogagan waxaanan iska ilaalin doonaa qoraalo dheeri ah. Hambalyo baloogga, waa wax fiican! Salaan iga timid Mexico
Jawaab websaydhkaaga dhaqaalaha